Rindrambaiko Fanovana sary eto Madagasikara
Famerenana feno momba ny lozisialy Photo Editor tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa Mac
Ny rindrambaiko fanovana sary dia ampiasaina indrindra hanatsarana na hanodinkodinana sary nomerika. Ity sokajy rindrambaiko rindrambaiko ity dia misy vidiny amin'ireo programa tsotra, izay afaka mampihatra effets tsotra tsotra fotsiny, hatrany amin'ny rindrambaiko manara-penitra ampiasain'ny mpaka sary matihanina ho an'ny filàna sarotra kokoa. Raha mitady zavatra somary tsotra ampiasaina ianao ary tsotra hianaranao ao amin'ny solosainao, dia mety tsy mila rindrambaiko fanovana sary ianao. Na izany aza, raha manana fahaiza-mamorona ianao ary maniry ny hahatonga ny fahaizanao manamboatra sary nomerika dia azonao atao ny mieritreritra ny hianatra ny sasany amin'ireo rindrambaiko misy.
Adobe dia iray amin'ireo rindrambaiko fanovana sary malaza sy be mpampiasa indrindra. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia mety handany fotoana be ianao amin'ny fampiasana azy amin'ny solosainao. Ary, raha mila rindrambaiko fanovana sary be pitsiny ianao, dia ho very vintana any amin'ny fivarotana zava-mahadomelina na fivarotana solosaina department store. Tsy hanana safidy firy ny mpanjifa antonony, noho ny toe-karena ankehitriny.
Soa ihany fa mbola misy toerana ahazoana rindrambaiko fanovana sary tsara indrindra ho an'ny filanao. Ny Internet ihany no toerana tsara indrindra aleha amin'ny vokatra toy ny Adobe Photoshop, na vokatra hafa mitovy amin'izany. Na izany aza, misy mpaka sary sy mpanakanto maniry be dia be izay te-hanararaotra ny sasany amin'ireo endri-javatra natolotry ireo programa ireo. Ka aiza no ahitanao ireo programa ireo?
Ho an'ireo mpaka sary amin'ny teti-bola, Apple iWork dia mety ho filokana tsara indrindra ho anao. Ny rafitra fikirakirana Mac an'ny Apple dia hiasa amin'ny ankamaroan'ny kinova PC sy fakan-tsary nomerika. Amin'ny lafiny maivana kokoa, tsy mila mandany sandry sy tongotra ianao raha te hahazo kinova rindrambaiko fanovana sary izay miasa miaraka amin'ny Mac, ka azonao atao ny mieritreritra matotra momba an'io fanamarinana io raha toa ianao ka tetibola tery.
Vao haingana i Microsoft no nanambara fa manolotra rindrambaiko fanovana sary tsara indrindra ho an'ny Internet amin'ny Internet izy ireo. Mba hahatonga azy io ho tsara kokoa kokoa, dia miaraka amin'ny fitsapana 30 andro maimaimpoana! Midika izany fa azonao atao ny mizaha toetra izay rehetra omen'ny Microsoft, nefa tsy mila mitaky vola be akory. Amin'ireo fitsapana maimaimpoana rehetra misy dia tokony tsy hanana olana ianao amin'ny fitadiavana programa izay miasa amin'ny solosainao ary mety aminao.
Mpanonta sary amin'ny Internet matetika no rindrambaiko manova sary tsara indrindra ho an'ny mpaka sary. Ny rindrambaiko tsara indrindra dia mamela anao hahita lisitry ny vidiny ho an'ny programa maro samihafa mifanila. Ny lisitra vidin-javatra matetika dia mety miovaova kely eo anelanelan'ny programa mifaninana, ka ny fahafantarana hoe iza no vidiny tsara indrindra ho anao mety tsy ho lohalaharana. Raha miantsena amin'ireo orinasa maro samihafa ianao, dia hojerena lehibe ny vidiny.
Misy koa programa vaovao antsoina hoe Google Photos. Ity programa vaovao ity dia manolotra fitaovana fanovana mandroso izay mifanaraka amin'ny vokatra Google sy Apple. Na dia maimaimpoana aza ny Google Photos, dia manana mpampiasa maherin'ny 500 tapitrisa izay mila mampiasa fitaovana fanovana isan'andro. Afaka mandika amin'ny mpanjifa mety ho anao izany.
Rehefa mitady programa fanovana sary maimaimpoana dia zava-dehibe ny mitady rindrambaiko manolotra fampiasa betsaka araka izay tratra. Mitadiava fitsapana maimaim-poana izay mihazakazaka mandritra ny 7 andro farafaharatsiny, ary alao antoka fa afaka manokatra ny programa amin'ny solosaina mihoatra ny iray ianao. Raha mandinika programa fanatsarana ashampoo ianao dia zahao ireo fitaovana fanovana sary maimaimpoana atolotra azy ary koa ireo fiasa izay atolotry ny orinasa amin'ny kinova andoavany.